घाँटीबगर–टिङ्कर ‘मोटरेबल’ सडक बन्ने — Arthatantra.com
Arthatantra.com > पत्रपत्रिका > घाँटीबगर–टिङ्कर ‘मोटरेबल’ सडक बन्ने
घाँटीबगर–टिङ्कर ‘मोटरेबल’ सडक बन्ने
काठमाडौँ । महाकाली करिडोर अन्तर्गतको घाँटीबगर–टिङ्कर ‘मोटरेबल’ सडक निर्माण गर्न सर्वेको काम सुरु भएको छ ।
कुल ८७ किलोमिटर लम्बाइको यो सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको छ । नेपाली सेनाले दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाको घाँटीबगरदेखि छाङ्रु जोड्ने घोडेटो बाटोको ट्र्याक सञ्चालनमा आएपछि नयाँ कामको थालनी भएको हो ।
निर्देशनालयका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले सरकारबाट सेनालाई प्राप्त भएको जिम्मेवारी बमोजिम महाकाली करिडोर अन्तर्गतको घाँटीबगर–टिङ्कर सडक निर्माणको सर्वे सुरु गरिएको जानकारी दिए ।
सर्वेका साथै सो सडकको निर्माण सम्पन्न गर्न यो वर्ष नै हुम्लिङ र माल भन्ने स्थानमा दुईवटा क्याम्प राखिने जानकारीसमेत उहाँले दिनुभयो । सेनाले घाँटीबगरदेखि छाङरु जोड्ने ४५० मिटर घोडेटो बाटोको ट्र्याक खोलेपछि नेपाली सेनाले स्थानीयलाई हस्तान्तरणसमेत गरिसकेको छ ।
“सेनाको टोलीले त्यहाँ सडक निर्माणका लागि क्याम्प स्थापनाका साथै सर्वे र डिजाइनको काम गर्ने छन्,” सैनिक प्रवक्ता पौडेलले भने, “निर्माण कार्य सम्पन्न भएसम्म टोली त्यहीँ रहने छ ।” यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा भउचप्रसाद यादवले लेखेका छन् ।
२०७७ असोज २७ गते ०७:३६ मा प्रकाशित
बागलुङमा १४ हजार ६५५ हेक्टर खेती योग्य जमिन बाँझो
फुटबलःनेपाल भर्सेस उज्वेकिस्तान !
बिक्री भयो नबिल बैंकको १ लाख ६२ हजार कित्ता सेयर !
एनआईसी एशियाले दिने भो २७ प्रतिशत बोनस सेयर र १५ प्रतिशत हकप्रद !
लुम्बिनी विकास बैंकको बोनस सेयरमा मूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति ?